Naif qaabka caruurnimada hal abuurka leh ee hilmaama xeerarka tacliinta | Abuurista khadka tooska ah
Naif qaab abuurka infantiKii illooba xeerarka tacliinta wuxuu matalayaa qaybteena ugu dhalan, geesi iyo xor, qaab meesha cabsi ayaa baaba'aysa waxayna isu bedeshaa garaac deg deg ah taas kama fekerayaan xeerarka iyo sharciyada tacliimeed ee waxa kaliya ee ay ku muujinayaan. Qaab leh macnaha carruurta taasi waxay na xasuusinaysaa caruurnimadeenii oo aan si fudud u sawiranay iyadoon wax kale ka fikirin.
Qaabka Naif ayaa u muuqda mid isaga u gaar ah nacasnimo iyo keli ahaansho oo leh natiijooyin buuxa midabyo dhalaalaya, aragti xeel dheer iyo rabitaanka ah in la muujiyo adduunyo halka muujinta ay tahay tan kaliya ee caadiga ah. Waa qaab taas waxaa lagu dari karaa farsamooyin kale gaarsiinta natiijooyin hal abuur leh. Cunuga dhexdeena kujira waa inuusan waligiis dhiman maxaa yeelay qeyb kamid ah waxay mataleysaa awooddeena hal abuurnimo.
El qaab jileec ah Waa a dhaqdhaqaaqa fanka oo lagu garto xariifnimo iyo istish-haadin isku dhafan midabbo dhalaalaya oo leh aragti macquul ah oo ah waxay ina xasuusinaysaa fanka caruurta. Qaabkan kama walwalayo matalaadda xaqiiqda, gacanta ha socodsiiso qof walbana qaabkiisa gudaha ayaa loo oggol yahay inuu soo baxo. Iyada oo qaabka nacasnimada ah waxaan nahay caruur markale mar labaad ilaaway dhamaan sharciyadii nagu qasbay inaan barto waqti kadib, qaabkani wuxuu ku dhintaa waxbarasho.
Markii aan baranay sida loo sawiro ama loo raaco xeerarka qaabkani wuu dhintaa maxaa yeelay waxaan hilmaamaynaa iskaa wax u qabso iyo nacasnimada caruurnimada in diirada la saaro adduunyo xeerar ka buuxo. Haddii aan dooneyno inaan qaabkan u sameyno waa inaan gebi ahaanba iska ilow xeerarka sawir oo aan diirada saarno oo kaliya muujinta wax aan dooneyno. Ilmuhu kama baqayo inuu sheego Taasi waa sababta sawirrada carruurtu u yihiin kuwo aad u xoog badan oo hal-abuur leh, innaga oo qaan-gaadh ah waa inaan dib-u-galnaa fikraddaas iskaa-wax-u-qabso ah oo aan u keennaa qodobka waayo-aragnimada shaqadeena.
Xariiq dabacsan, xariiq dareere ah, qaabab aan dhibco baaba'ayn ama sawir fudud oo dhammaystiran laakiin xaqiiqada dhinac iska dhigaya. Waa suurtagal in la helo qaabab badan iyo noocyo naif ah maadaama aan nahay dad hal abuur leh waan awoodnaa isku dar farsamooyin oo abuuro wax cusub, sababtaas awgeed fursadaha nacasyadu waa kuwo aan xad lahayn.
Waa qaab aad u ballaadhan maxaa yeelay waxaan ku dari karnaa farsamooyinka kale ee balaastigga ah si aan u gaarno natiijooyin hal abuur leh iyo darajooyin kala duwan oo muujinta ah, sawir leh hal khad ma aha mid la mid ah sawiridda farsamada kolajka, labaduba waxay muujinayaan waxyaabo kala duwan xitaa haddii waxay ku jiraan qaabka ilmaha. Sawirka kore waxaan ku arki karnaa isku dar ah qaab nacasnimo leh farsamada kolajka, labada tibaax ayaa la isku daray si loo gaaro natiijo cusub oo hal abuur sare leh, kiiskan saameyntu waxay ka yimaadeen farshaxanno badan Javier Marshal y Andy Warhol.
Intaad wax ka haysato muuji, qaab jileec ah waxaad yeelan doontaa natiijooyin aad u hal abuur leh oo ay ugu wacan tahay awoodda aad u leedahay u oggolow wax walba qalad la'aan, waa inaan nahay u fikir sida caruurta mar kale markaad ka shaqeyneyso qaabkan iyo iloobaya in la sameeyo xukunka qiimaha on haddii ay sax tahay iyo in kale. Qiyaas, ku tijaabso farsamooyin kale oo u oggolow maskaxda ilmaha inuu duulo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Naif qaab ciyaareedka cajiibka ah ee carruurta ee midabkiisu ka buuxo
Maxaan ka baran karnaa bilowgii naqshadeeye Jessica Walsh?